इतिहासमा पहिलो पटक यति धेरैले घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कतिमा झर्यो ? – hamrosandesh.com
इतिहासमा पहिलो पटक यति धेरैले घट्यो सुनको भाउ, तोलाको कतिमा झर्यो ?
मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा ३०० रुपैयाँले गिरावट आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यही वैशाख २७ गतेदेखि कतारी रियालको कारोवार बन्द हुने जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै सो अवधिभित्रै कतारी रियाल सटही गर्न भनेको छ । त्यसपछि कारोवार बन्द हुने सूचनामा उल्लेख छ ।